Umthandazo kwiingelosi Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ngamanye amaxesha sinokungabaza indlela esivakalelwa ngayo ngeNkosi, ngoko ke kubalulekile ukuphakamisa a umthandazo kwiingelosiUkomeleza imvakalelo, kwinqaku elilandelayo sibonisa iindlela zokwenza.
1 Umthandazo kwiingelosi ngamaxesha apho sifuna uncedo
1.1 Qhubeka uqhubeke
2 Umthandazo kwiingelosi ukomeleza ukholo
Umthandazo kwiingelosi ngamaxesha apho sifuna uncedo
Somandla Thixo Somandla, wena unguBawo wabo bonke, iNkosi yethu enamandla onke ethanda kwaye ikhethe abo batsala iintlungu, usizi, izifo kunye nentlungu nokuba kukwamoya okanye emzimbeni, ndiyakucela ukuba usinike izicelo ezithobekileyo, zizele luthando nokuthobeka esikucelayo kuwe. Sivumele sisindiswe ziingelosi zakho, ngamaxesha okuswela, ukugula, ukudinwa kunye nokugula.
Thatha isandla sabathunywa bakho emsebenzini wabo wokucoca imiphefumlo yethu kwaye uphile uYise oNgcwele weZulu. Ndithetha nabathunywa bakho, iiNgelosi zakho ezikhusela ubomi nayo yonke into engcwele, izidalwa ezigcwele ubunyulu nokukhanya, abo bazele kukulunga, abanikezela ngemizamo yabo kuthi bantu basemhlabeni.
Ndandihlala ndicinga ukuba iiNgelosi ziyasikhusela ngalo lonke ixesha, zisikhapha kwiimvana zeNkosi, zisithintele ekuthatheni indlela engeyiyo kwaye zisigcine esonweni, sithwele emagxeni abo ubunzima obugqithisileyo bokuba ngabagcini bendalo. Kubo namhlanje ndiza kuwe, ezulwini.
Sondela kum, ndiyakucela ukuba wehle ezulwini kwaye undinike uncedo lwakho olungcwele, inkathalo yakho nothando lwakho. Nina nikhonza ngokuthe ngqo ngokomyalelo waKhe, nina nibukele ngokuzincama okungafikelelekiyo, nivumela usuku nosuku ukuba lubenako ukubathwala bonke abo bazifumana sikwindlela enzima.
Ndiyakucela namhlanje, nceda, ube ngamandla am xa, ngethuba elingaphaya kwamandla am, ndizifumana ndibuthathaka. Ndiyakucela, ngokuthobekileyo kwaye ndiyalivuma igunya lakho, ukuba undikhathalele undikhusele kubunzima endijongene nabo. Nceda unike amandla akho kunye nokhathalelo ngohlobo lwentsikelelo kwaye ube sisiqabu seengxaki endijongene nazo (zinokuba zezemali, ezempilo okanye ubudlelwane bobuntu, into ebalulekileyo kukuthetha ingxaki ngokunyaniseka) kwaye uvule phambi kwam indlela eya yonke enye into endiyifunayo ukuze ndiqhubeke.
Ndiyakucela ngegama leNkosi yethu uSomandla uThixo, egameni likaMariya, uKumkanikazi weZulu nomama weNkosi uYesu Krestu, ukuba uze kum kamsinya kwaye ususe ukungazinzi okulawula ngaphakathi komphefumlo wam. Ixhala lekamva kunye nobunzima bexesha elidlulileyo obundityayo. Ndincede ngobunzima bamasango obulumko avaliweyo phambi kwam, ngaphandle kokundinika indlela okanye ithuba lokujonga le nto bayifihlayo.
Zombini iingelosi kunye neengelosi ezinkulu, wena onika ngaphandle kokulindela nantoni na, namhlanje ndiyabulela ngayo yonke into ondincede kuyo ngaphambili. Nceda ubonise iNkosi yethu uThixo umthandazo wam oshushu kunye negama lam, ndicela uncedo. Nceda undenze ndimamele le ndiyicelayo phambi kwakho, ukuze ndikwazi ukushenxisa iingxaki ezindivalelayo. Wanga, ngobabalo lwaKhe olungapheliyo, aqhubeke nokundizalisa ngethemba lekamva elingcono, lekamva elinoxolo ngaphandle kokukhathazeka okuninzi. Ndiyakwazi ukubulela ngonaphakade ngongenelelo lwakho olungcwele kwaye ndiya kuhlala ndikuthwele emphefumlweni nasentliziyweni ubomi bam bonke.
Iingelosi ezigcina isibhakabhaka, zithwale iminqweno yam kumaphiko enu kwaye nithandaze kwiParadesi ahlala kuyo uThixo wethu, ukuze niphumelele kwaye nizinze. Ezempilo kunye nokuphilisa ngokomoya, kum nakwintsapho yam. Ngamana angaba ngugqirha wezifo zam, angaba sisikhokelo somoya wam, ndiya kuthandaza kuThixo nakuwe ukuba ukhanyise indlela yam ukusukela ngoku, ukundivumela ukuba ndinyukele ezulwini ndingumntu olungileyo.
Ndiyakucela, zingelosi ezikhulu, jika, ndikhusele ubukho bam kuyo yonke into eyoyikisayo eyophula inqaba yokholo lwam. Khathalela ububi obuzama ukundenzakalisa kwaye undinike umlindo, egameni likaYesu, uMariya noBawo waseZulwini ndiyakucela. Amen.
Ukongeza kweli nqaku kwaye ukuba ucinga ukuba iluncedo kuphando lwakho, siyakumema ukuba undwendwele amakhonkco acetyiswayo apha ngezantsi:
Umthandazo kwiingelosi ukomeleza ukholo
Ndiyathandaza kwiingelosi, ezithunyelwe yiNkosi, ukuba zize phambi kwam, njengoko umphefumlo wam udibanisa namandla abo asezulwini kwaye undivumele ukuba ndibe ngumntu woxolo. Ukuphefumla ngakunye, inyathelo ngalinye, intshukumo nganye indenza ndifanele ngakumbi ukuthanda kwakhe nothando. Zonke izigqibo zokunganikezeli kwizinto ezihlambeleyo zindenza ndisondele ngakumbi eNkosini. Onke amandla amabi ebekhona kum asuswa ukusondela kwam kuni kukukhanya okungapheliyo. Umphefumlo wam kunye nomzimba wam ofayo unikelwe eNkosini, kuba ndizalelwe ukumkhonza.
Ke ngoko, ubandlululo lwam kunye nengqumbo yam kufuneka isuswe, kuba kuye kukho inyaniso kwaye inyani izisa uxolo nayo. Njengokuba usondela kule ndawo isecaleni kwaye iyimfihlo, ndiyakucela, sukuthatha ixesha lam elidlulileyo ukugweba lo mboniso wam, kuba ubukho beNkosi busindisile kum, into ebendingenangxaki nayo ngaphambili.
Oo Zingelosi, ezibeke izandla zakho emagxeni am kunye namaphiko akho ngeenxa zonke kum, ndihlambulule kwaye undenze ndifanele indawo ezulwini, indawo evumela ukuba ndincome ubabalo lwaKhe ngaphandle kokuziva ndinentloni ngenxa yezono zam. Ndifuna ukuzifumana, emva kokuthandazela wena, kwindawo apho intlawulelo ingelo phupha okanye ulangazelelo, mandithathe isandla sakho undikhokele uye kwiNkosi yam. Mandifeze injongo yam yokukukhonza ngonaphakade.
Ndiyakucela ukuba uqhubeke ubeka iliso kumendo obuthathwe bubomi bam, ngokuzikhethela kwakho. Ndiyakubongoza ukuba ubone oyena mntu ndinguye ngaphakathi kwaye ukuba ndithathe inyathelo elikukhubekisayo, ndicela uxolo, kuba andinakukwazi ukulungisa imeko yam yomntu. Ndinomnqweno wokuphucula iiNgelosi, ke ndicela ukuba zindinike inzuzo yokungathandabuzeki, kuba ngamanye amaxesha uloyiko kunye nentlungu zingasibekela ityala Kwimvana elula yeNkosi. Ndifuna ukuba uqaphele ukuzimisela endikhokelela kuwo umphefumlo wam, kuba injongo yam nguThixo.
Ke ndiyaluxabisa unyamezelo lwakho kunye nobukho bakho. Egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele, amen.